Antigua na Barbuda na-ewusi mmekọrịta onye ọlụlụ ike maka mmeri mmeri maka oge ụgbọ mmiri na-abịanụ 2019/2020
Location: Mbido » Ịdee » Isesgbọ mmiri » Antigua na Barbuda na-ewusi mmekọrịta onye ọlụlụ ike maka mmeri mmeri maka oge ụgbọ mmiri na-abịanụ 2019/2020
Ndị nnọchi anya njem nlegharị anya nke Antigua & Barbuda nke Hon. H. Charles Fernandez nwere nzukọ na usoro nke mba ahụ dị oke mkpa na ndị mmekọ na Seatrade Cruise Global, nnukwu ọgbakọ kwa afọ nke a na-enwe na Miami Beach Convention Center.
Nzukọ kwa afọ nke Seatrade Cruise Global Conference nyere Antigua na Barbuda ohere ịghara ịhapụ ohere iji gosipụta ngwaahịa na ọrụ ya na ndị na-azụ ahịa na ndị na-eme mkpebi. O nyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ ohere pụrụ iche ịkparịta ụka n'withntanet site n'akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ, wee kpughee ndị isi ya na ndị njem na mmemme ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ nke ogbako ahụ, nke na-enye ndị sonyere ohere ịnọrọ n'ihu usoro ahụ.
Othlọ ndò ahụ mara mma nke mba ahụ bụ ebe ọrụ dị ka ndị ọrụ njem njem nlegharị anya nke Antigua na Barbuda na-eduzi usoro nzukọ otu otu na ajụjụ ọnụ na mgbasa ozi.
Na nkwukọrịta ya na mpaghara ndị bụ isi ebumnuche ahụ nyere mmelite nye ndị ọrụ ụlọ ọrụ ya na mmekorita ọkwa ya na Global Port Holdings (GPH) na atụmatụ gọọmentị iji gbasaa ụlọ ọrụ St. John's Port, iji debe ebe ị ga-eji. ụlọ ọrụ na - eto eto na - eto eto na - ebuwanye ibu.
GPH jikwa ohere a kwuputa mmekorita ya na ebe ndi ozo Caribbean abuo Antigua na Barbuda na Bahamas n’ememe nnabata ndi mmadu ndi mmadu 600 nyere.
Na nzuko mgbe ha zutere ndị isi ụgbọ mmiri na-akwado nkwado ha maka ụzọ Antigua & Barbuda mere iji meziwanye akụrụngwa ya iji nye ọrụ kachasị mma maka njem ụgbọ mmiri. Ihe kariri ihe ọ bụla ọzọ ga - eme ka o doo anya na ọ ga - abụrịrị ọnọdụ nke ọma dị ka ebe kachasị aga njem na Caribbean na ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri.
Nnukwu mmụba maka njedebe na-abịa site na onye mmekọ ụgbọ mmiri nke Key European bụ TUI Cruises onye ụgbọ mmiri ọhụrụ ya bụ Mein Schiff 2, ga-abawanye oku na-aga ebe a na-anọghị afọ atọ. Mein Schiff 2 ga-eleta ebe ọ na-aga na inaugural oku na November 6th na ngụkọta nke 13 oku maka oge 2019/20 eweta ihe karịrị 37,000 njem.
Ọzọ key Partner Norwegian Cruise Lines ga-alọta na "Epic" nke Norwegian nke bụ ihe ntụgharị nke ghọziri nke na-adịgide adịgide, yana "Nwee obi uto" Norwegian na breakaway tinyere klaasị. Shipgbọ a ga-eme oku mmalite ya na Disemba 9th nke nwere ihe karịrị puku mmadụ anọ.
Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL) otu n'ime ndị mmekọ dị mkpa nke mba ahụ gosipụtara na ụgbọ mmiri buru ibu ga-eje ozi ebe a na-abịa oge a ma anyị ga-ahụ mmụba ihe ruru ndị njem 250,000 afọ a site na usoro dị iche iche. Antigua na Barbuda na-aga n'ihu na-edekọ ọnụ ọgụgụ afọ ojuju nke ndị ahịa nke 8.8 site na nke kachasị nke 10 na ndị ọbịa RCCL.
MSC na-agbatị ụgbọ mmiri na-eto ngwa ngwa n'ụwa, Antigua gosipụtara na ọ ga-anọgide na-abụ ọdụ ụgbọ mmiri dị mkpa ka ụlọ ọrụ ahụ nwere ụgbọ mmiri ọhụrụ 10 n'usoro ma na-amụba ụgbọ mmiri ya na ụgbọ mmiri 29 na nnyefe nke otu ụgbọ mmiri ọhụrụ kwa afọ. ruo 2027.
Na nkwonkwo nzukọ ya na ndị nnọchi anya maka Carnival Corporation Cruise Lines, ndị niile so na ya sonyere na ọkwa kachasị elu ka ha na Antigua na Barbuda wee rụkọọ ọrụ ọnụ.
Ọnụnọ nke mba ahụ na Seatrade na-emekwa ka ndị mmekọ mpaghara ahụ nwee ike izute ndị na-ahụ maka ịkwa ụgbọ mmiri iji mụbaa njem njegharị na njem njem ha. Ndị mmekọ mpaghara gụnyere Wadadli Cats, South American Ventures Ltd, Rlọ ọrụ Rendezvous na Tropical Adventures.
Mịnịsta njem na Hon. Charles Fernandez na nzukọ niile kelere ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ ụgbọ mmiri maka nkwado ha kemgbe ọtụtụ afọ ma gosipụta ntinye anyị na anyị na ndị mmekọ niile ga-arụkọ ọrụ maka mmeri mmeri ka mba ahụ na-aga n'ihu n'okporo ụzọ mmepe ya ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ mmiri mbido maka njem ụgbọ mmiri niile. Caribbean. "Ndị isi ụlọ ọrụ na-akọ na 2018 bụ afọ kachasị mma maka ịba uru ma buru amụma na, yana akwụkwọ ndekọ ndekọ maka ụgbọ mmiri ọhụrụ 70 n'ime afọ atọ na-esote yana nde 25 nde aga njem na 2019, Caribbean gara n'ihu ịbụ ọnụ ọgụgụ ụwa. otu ebe njem. Ihe nlebara anya ohuru na imalite akụrụngwa anyị site na gọọmentị etinyela ọnọdụ ebe ọ ga-abawanye òkè ya na azụmaahịa a, Mịnịsta Fernandez kwuru.
Ọzọ na: Company | Tourism | Antigua na Barbuda | Ugbọ mmiri TUI | Miami | Ntu | Beach | Caribbean | Antigua | Government | Corporation
Ndị njem nlegharị anya Caribbean kpọrọ onye ndụmọdụ nkwukọrịta ozi ọhụrụ Caribbean, Corporation, Tourism|
Ibiza abalị ndụ: Ihe ị chọrọ ịma Beach|
Nkwupụta maka nyocha nke ọnwụ na Exuma sitere na Bahamas Prime Minister Chester Cooper na-eme ihe Government, Tourism|
Emelitere izu ike nku ume na-enyere aka ịgwọ ọdịda akpa ume Company, Corporation|
Antigua Antigua na Barbuda Beach Caribbean Ntu Company Corporation Government Miami Tourism Ugbọ mmiri TUI
Anọ Oge anọ Hotel Madrid na-anabata onye isi njikwa ọhụrụ
Ntuziaka CDC COVID izu ike ọhụrụ ajụjụ na azịza
Ọnụ ahịa irighiri abụba mmiri ara ehi 2022 | Usoro kacha ọhụrụ...
Abu Dhabi 31st International Book Fair ekpughere…